यस्तो छ हाइब्रिड भर्सनको यामाहा फ्यासिनो १२५ :: Setopati
यस्तो छ हाइब्रिड भर्सनको यामाहा फ्यासिनो १२५
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, असार ७
यामाहाले फ्यासिनो १२५ एफआई स्कुटरको हाइब्रिड भर्सन सार्वजनिक गरेको छ। कम्पनीले यो भर्सनमा केही मेकानिकल अपडेटहरू गरेको छ। बाहिरी आवरण पनि नयाँ शैलीको तयार पारेको अटो एक्सले जनाएको छ।
हाइब्रिड भर्सनको फ्यासिनो १२५ मा बिएस ६ मापदण्डयुक्त एयरकुल्ड, १२५ सिसी सिंगल इन्जिन युनिट प्रयोग भएको छ। जसले ६ हजार ५ सय आरपिएममा ८ बिपीएच पावर र ५ हजार आरपिएममा १०.३ एनएम टर्क जेनेरेट गर्छ। यो स्कुटर डिस्क र ड्रम दुवै भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछ।
यो स्कुटरमा डिआरएलसहितको एलइडी हेडलाइट र टेललाइट छ। त्यस्तै आफ्नो स्मार्टफोनमार्फत् स्कुटरलाई ब्ल्युटुथमा कनेक्ट गर्न सकिन्छ। यसमा 'लोकेट माइ स्कुटर' गर्न मिल्ने फिचर उपलब्ध छ। जसले स्कुटर भएको ठाउँ पत्ता लगाउन मद्दत गर्नेछ। फ्यासिनो १२५ हाइब्रिड ६ नयाँ रंगमा उपलब्ध हुनेछ भने पहिला देखिको ४ रंगमा पनि यो उपलब्ध हुन्छ।
फ्यासिनो १२५ हाइब्रिडको बजार मूल्यबारे कुनै जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। तर स्कुटर सन् २०२१ को त्रैमासिकसम्ममा सार्वजनिक हुने अनुमान लगाइएको छ। यो स्कुटरसँगै यामाहाले रे जेडआर १२५ को स्टान्डर्ड र र्याली पनि अपडेट भर्सनमा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ। फ्यासिनोमा २०२१ मा भएका अपडेट यी दुवै भेरियन्टमा पनि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अहिले भारतीय बजारमा फ्यासिनो १२५ को मूल्य ७४ हजारदेखि ७७ हजार ५ सयसम्म छ। नयाँ भर्सनको स्कुटर मूल्य ५ हजारसम्मले बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
नेपाली बजारमा हाल उपलब्ध यामाहा फ्यासिनको १२५ एफआइको सुरुवाती मूल्य २ लाख ५६ हजार ९ सय रुपैयाँ छ। नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज हो।
प्रकाशित मिति: सोमबार, असार ७, २०७८, १६:२५:२९
खाडीमा घरेलु कामदार प्रतिवन्ध फुकुवा गर्न सरकारलाई ज्ञापन पत्र
रोयल इन्फिल्ड मिटियोर–३५० सिसीको तीन भेरियन्टका मूल्य कति?
स्कोडा कुशाकको बिक्री सुरु, मूल्य कति?
साझालाई बिजुली बस बेच्न ९ कम्पनीले हाले टेण्डर